Earn Shona - Digital Cosmos
Kugamuchirwa kune Dhijitari yeCosmos mukana mukana. Zvino, iwe unogona kuwana mari nekuputika Dhigirii yekutengesa mukana wepasirese.
Iwe haufanire kumirira kuti udzidze Digital Marketing. Haufanire kushandisa mari nenguva kune izvozvo zvachose. Sei? Zvakareruka seizvozvo, takuitira zvese izvozvo iwe, isu takashandisa nguva, mari uye simba rekugona neDhijitari Kushambadzira kubva kumakona ese. Tarisa yedu certification of I V S PRASAD baba uye SRUTHI mwanasikana, tinozvidaidza seDaFa uye DaFa.Rocks ndiyo webhusaiti yedu zvakare ..
Saka Izvo zvaunoda kuti uwane mukana uyu wekupa zvese zvikamu zveDhijitari Kushambadzira senge, Webdesign (WordPress Websites), Graphic Design, Kushambadzira Mavhidhiyo, SEO, Nhau Yemagariro Ekushambadzira, Email Kushambadzira, Zvekushambadzira Zvemukati, Zvepamhepo Ads sePPC google ads, facebook ads . zvishandiso zvekushambadzira senge ongororo, kufudza kumashure
Idzi dziri pamusoro ndedziya mikana mishoma yekupa kwebhizinesi diki mukati uye rakapoteredzwa muvakidzani wako hood kana mumhuri uye neshamwari denderedzwa kana nekugovanisa automated affiliate link zvinoshamisa zvakagadzirirwa kugovana munhau ve facebook, whatsapp, youtube instagram, nezvimwe. peji yakanyatsogadzirirwa kuturika yakarongedzerwa zvizere kune vanobatana zvakanyanya. Kutanga newe unokwanisa kuwana 20% yeye yese purofiti yatinogadzira kubva kune iwo mairairo anotumirwa newe, kana iwe pachako kana neako automated yakasangana yakabatana link kubva kune chero kupi pane Internet pasi rose. Kune vanoita zvirinani, tinoda kugovana zvimwe zvikamu, izvo zvinogona kusiana kubva pane imwe nguva kusvika kune imwe
Fona _97760636363 paWhatsapp kubva chero kupi munyika chero nguva kutenderera kwewachi. Nhengo dzechikwata chedu dzakazvitsaurira dzichamuka zvakanyanya kuti dzibatsire pane chero nyaya. Iwe unogona kutaura pane yedu Tawk.to/join peji zvakare chero nguva kubva chero kupi.
Ingonyoresa pasi apa uye uteedzere mirayiridzo. yemubvunzo chero ipi neipi [email protected]